Andranopasy - Wikipedia
Isam-ponina 10 225 mponina
Andranopasy dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Manja, Faritanin'i Toliary. Ny isam-poniny dia 10225 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 50211 ary ny kaodin-distrika dia 502
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mais. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia pois du cap. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia haricot. Ny isan'omby dia 9700. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mais. Ny entana lafo vidy indrindra dia pois du cap. 75 ny mponina no miasa tany. 20 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 5 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 215 no isan'ny kisoa.
Ahitana fikambanam-piasatanana ao. Ahitana fikambanam-panjono ao amin'io tanàna io. Ahitana fikambanam-pampiasa rano ao.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Misy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara maivana base. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 15 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 12 ora. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 50000 Fmg. Misy fikambanan'ny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 85000 Fmg.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andranopasy&oldid=797934"